व्यर्थका विवादहरु | मेरो खेस्रा whatever i feel
नेपाल साप्ताहिकको मेरो स्तम्भ ‘बायाँ फन्को’बाट
आजकल मलाई बेलाबेला हामीसंग स्कूलमा संगै पढ्ने एक जना साथीको सम्झना आइरहन्छ । हामी दुइ कक्षादेखि एसएलसी दिने बेलासम्म संगै पढ्यौं । ऊ पढाइमा अब्बल थियो त्यसैले हरेक पटकको परीक्षामा एक देखि चार भित्रमा पथ्र्यो । पढाइ बाहेकका अरु सबै कुरामा पनि ऊ राम्रै थियो । साथीहरुसंग मिलनसार र हँसिलो थियो । उसले कसैसंग नचाहिँदो वादविवाद वा झैझगडा गरेको मलाई हेक्का छैन । ऊ बेलाबेलामा अरुहरुको नक्कल गरेर हामीलाई हँसाउने पनि गथ्र्यो । एक पटक त्यस्तै मूडमा उसले हामीलाई भकभकाएर बोल्ने मानिसको नक्कल गरेर सुनायो । आलाकाँचा केटाकेटी हामी मरिमरि हाँस्यौं ।
कसैको भिन्न क्षमतालाई पनि अरु सरह सम्मान गर्नुपर्छ र त्यसमा ठट्टा गर्नु हुँदैन भनेर त्यतिबेला हामीलाई थाहा पनि थिएन, कसैले सिकाएको पनि थिएन । हामी रमाएको देखेर उसले झन् उत्साहित भएर त्यो कुरालाई निरन्तरता दियो । त्यसको निकै दिन पछि सम्म पनि साथीभाइहरु उसलाई बेलबेला त्यो नक्कल गर्न अनुरोध गर्थे र ऊ पनि दंग पर्दै अघि सरिहाल्थ्यो । त्यही क्रममा कुनबेला देखि त्यो बानी उसमा सर्न पुग्यो थाहा नै भएन । अब त ऊ नभकभकाइकन बोल्नै नसक्ने भयो । उसले निकै प्रयत्न गर्दा पनि त्यो बानी छोड्न सकेन । स्कूल जीवनसम्म त्यो बानी उसैसंग रह्यो । पछि हाम्रो बाटो अलग भयो । अहिले ऊ विदेशमा एउटा सफल चिकित्सकका रुपमा स्थापित भएको रहेछ । निकै कठीन प्रयास पछि धेरै लामो समय पश्चात् मात्र उसले त्यो बानी छोड्न सफल भएको रहेछ । भकभकाएर बोल्ने मानिसहरुको बोलीमा नजानेरै भए पनि उसले गरेको ठट्टाको उसले ठूलै मोल चुकाउनु परेको हुनुपर्छ ।
त्यसैले कस्तो बानी लाग्न दिने वा नदिने भन्ने कुरामा हामी चनाखो हुनै पर्छ । विशेष गरेर मानिसको स्वभावैले गर्दा राम्रो बानी लगाउन वा अनुशासन सिक्न उसलाई गाह्रो हुन्छ भने नराम्रो बानी सिक्न, अराजक हुन र अनुशासनहीन हुन उसले सहज रुपमा सिक्छ । माथिको उल्लेख गर्दा मैले त्यसरी बोल्ने बानीलाई नराम्रो भन्न खोजेको अर्थ चाहिँ कतैबाट नलागोस् । त्यस्तो बोलीलाई नक्कल गरेर हाँसो गर्नुलाई नराम्रो बानी भन्न खोजिएको मात्र हो, एउटा उदाहरणको रुपमा मात्र त्यसलाई लिइएको हो । त्यसैले मानिसले के सिक्दैछु, के गर्दैछु र कस्तो कुराको अभ्यास गर्दैछु भन्ने कुरामा सतर्क हुनु आवश्यक छ । दीर्घकालीन असरका बारेमा नसोचेर क्षणिक रमाइलो, आवेग वा उत्तेजनामा लागेर हामी कतिपय यस्ता बानी वा प्रवृत्तिहरुहरु सिकिरहेका हुन्छौ जुन कालान्तरमा गएर हाम्रो चरित्र वा हाम्रो प्रकृति नै बन्न पुग्छ । कतिबेला यस्ता कुराले हामीभित्र जरा गाड्छन्, गहिरो हुन्छन्, हाम्रो सम्पूर्ण व्यवहारमा तिनको टुसा लाग्छ, हुर्किन्छ र झाँगिन्छ भन्ने हामीले थाहा नै पाउँदैनौ । हाम्रो मानसिकतामा गहिरिएर गाडिएको त्यो जरा र विशाल वृक्ष बनेर हाम्रो आचरणमा उभिने त्यस्ता बानीहरु उखेलेर फ्याल्न असम्भव नभए पनि निकै कठीन भने अवश्य हुन्छ ।
आजकल हाम्रा कुराकानी, छलफल, पत्रपत्रिका, सामाजिक संजालका अभिव्यक्तिहरु हेर्दा एउटा त्यस्तै अचम्मको बानी हामीलाई लागिरहेको जस्तो लाग्न थालेको छ । त्यो बानी हो, विवादको । पछिल्ला केही समयका हरेक भने जसो कुरामा हामी विवाद गरिरहेका छौं, असाध्यै धेरै मतभिन्नता देखाइरहेका छौं । कसैले भनेको कुनै पनि कुरामा अरु सबैले विवाद गरिरहेका छौं र अलमलिंदा अलमलिंदै हरेक कुरामा फुकाउनै नसक्ने गाँठहरु बनाइरहेका छौं । एउटा तात्तातो उदाहरण नेपाली क्रिकेट टीमको प्रशिक्षकको सकिन लागेको करारको विषयमा देखियो । उनको करार नवीकरणमा किन ढिलाई भनेर आवाज उठ्दा नउठ्दै त्यो करार नवीकरण भएको समाचार आयो । त्यसपछि एक समूह विवाद गर्न थालिहाल्यो, अरु कोही थिएन र तिनकै करार नवीकरण गर्नु पर्ने ? यो त एउटा सानो उदाहरण मात्र हो ।
हुन त वादे वादे जायते तत्ववोधः भनेर हामीलाई सानै देखि रटाइएको छ । विवादले फरक दृष्टिकोणहरुलाई स्थान दिन्छ, भविष्यमा आउन सक्ने जटिलताको पूर्वाभाष हुन सक्छ र समस्या आउनु अघि नै समाधानका उपाय खोज्न सघाउ पु¥याउँछ भन्ने कुरामा दुइ मत छैन । रोगको उपचार भन्दा लाग्नै नदिनु राम्रो भन्ने कुरा आफ्नो स्थानमा सत्य छ । तर हामीले विगतमा हरेक विषयमा प्रकट गरेका मत भिन्नताहरुलाई केलाएर हेर्ने हो भने मनमा एउटा प्रश्न उत्पन्न हुन्छ । के कुनै पनि क्षेत्रमा कुनै पनि सर्वसम्मत हुन सक्ने योजना नबनेकै हुन् ? समस्याहीन, निस्वार्थ र सबैको हितका बारेमा कसैले पनि केही कामै नगरेका हुन् ? राजनीति, चुनाव, मतगणना, परिणाम, खेलकूद, निर्माण, कला, साहित्य, प्रशासन, विकास, योजना, बजेट, निर्माण, नीतिनियम, कानून, कर्मचारी नियुक्ति, सरुवा बढुवा, शिक्षा र सम्विधानसम्मका व्यापक विषयहरुमा हेर्ने हो भने जताततै विवादै विवादका डुङ्गूर बाहेक केही पनि देखिंदैन ।
एउटाले भनेको कुनै पनि कुरा अर्कालाई किन जायज लाग्दैन ? के सबै आआफ्ना व्यक्तिगत, राजनैतिक, आर्थिक वा अन्य कुनै स्वार्थ र पूर्वाग्रहले मात्रै निर्देशित भैरहेका हौं त ? हामीमा हरेक कुरामा अनावश्यक विवाद गर्ने बानीले जरो गाड्न थालेको त हैन ? अरुको कुरा मान्यो भने सानो भइन्छ भन्ने भ्रान्तिको वीजारोपण भएको त हैन हाम्रो मानसिकतामा ? यदि त्यसो हो भने त हामीले आफूमा साह्रै नराम्रो बानी लगाइरहेका छौं । यो बानी त आजै, अहिल्यै नै हटाउनु आवश्यक भइसक्यो ।
कि त्यसमा पनि कुनै विवाद छ ?
« थ्याङ्क यू क्याप्टेन